Bit By Bit - အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်း Creating - 5.5.4 အံ့သြ Enable
အခုဆိုရင်သင်တစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောသိပ္ပံနည်းကျပြဿနာအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောလူတွေရှိသည်, သင်သည်သူတို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုကတန်ဖိုးအရှိဆုံးနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရှိသည်သောသူတို့အားသင်အံ့သြသွားရန်အဘို့အအခန်းထဲမှာထားခဲ့ဖို့သေချာပါစေ။ ဒါဟာနိုင်ငံသားသိပ္ပံပညာရှင်များသည် Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့် Foldit မှာခေါက်ပရိုတိန်းမှာနဂါးငွေ့တန်းတံဆိပ်ကပ်ပြီတော်တော်အေးမြသည်။ ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏, ဤစီမံကိန်းများကို enable လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြရာဖြစ်တယ်။ အဘယ်အရာကို, ငါ့အမြင်အတွက် ပို. ပင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ဤလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းပင်၎င်းတို့၏ဖန်တီးသူအားဖြင့်မျှော်လင့်ခဲ့သိပ္ပံနည်းကျရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, က Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံအသိုင်းအဝိုင်းသူတို့ခေါ်နက္ခတ္တဗေဒအရာဝတ္ထု၏အသစ်တစ်ခုလူတန်းစားရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ် "အစိမ်းရောင် Peas ။ "
"Give Peas တစ်ဦး: Hanny ဗန် Arkel တစ်ဒတ်ခ်ျကျောင်းကဆရာ, ထိုမှတ်မိလွယ်တဲ့ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူက Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံဆွေးနွေးမှုဖိုရမ်အတွက်ချည်စတင်ခဲ့သည့်အခါအလွန်အစောပိုင်းက Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံစီမံကိန်းတွင်အနည်းငယ်ကလူပုံမှန်မဟုတ်သောအစိမ်းရောင်အရာဝတ္ထုသတိထားမိပေမယ့်သူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်း crystal ခဲ့သည် အခွင့်အလမ်း "သြဂုတ်လ 12, 2007 စတင်ခဲ့သောအဆိုပါချည်, ပြက်လုံးနဲ့စတင်:" ။ သငျသညျညစာအဘို့ထိုသူတို့စုဆောင်းနေ ?, "ဒါပေါ်တွင်" Peas, ရပ်တန့် "နှင့်။ ဒါပေမယ့်တော်တော်များမကြာမီအခြား Zooites မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပဲပို့စ်တင်တော့တာပဲ။ ဤကဲ့သို့သောရေးသားချက်များတက်ဖေါ်ပြခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးသည်အထိအချိန်ကျော်တိုင် ပို. နည်းပညာနှင့်အသေးစိတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်: "သင်ကဲ့သို့အနီရောင်ဆီသို့ဆိုင်းအောက်ပါဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါ OIII လိုင်း (5007 angstrom မှာ '' ပဲ '' လိုင်း) \_(z\_) တိုးနဲ့ပျောက်ကွယ်သွား အဆိုပါ Infra-အနီရောင်အကြောင်းကိုမှာသို့ \_(z = 0.5\_) ဆိုလိုသည်မှာ "မမြင်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် (Nielsen 2012) ။
အချိန်ကျော်, အ Zooites တဖြည်းဖြည်းနားလည်သဘောပေါက်နှင့်ပဲစေ့တွေဟာသူတို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက် systematizing ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဇူလိုင်လ 8, အပေါ် 2008-နီးပါးအပြည့်အဝတစ်နှစ်အကြာတွင်-Caroline Cardamone တစ်ခုနက္ခတ္တဗေဒဘွဲ့ရယေးလ်မှာကျောင်းသားနဲ့ Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံအသင်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး, အကိုစုစည်းပြီးကိုကူညီပေးဖို့ချည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး "ပဲ Hunt က။ " နောက်ထပ်စိတ်အားထက်သန်အလုပ်လာတော့သည်နှင့်ဇူလိုင်လများက : 9, 2009 စက္ကူခေါင်းစဉ် "ကို Compact ၏အတန်းအစား၏ Discovery အလွန့်အလွန်စတား-ဖွဲ့စည်းခြင်း Galaxy က Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံအစိမ်းရောင် Peas" နဲ့တော်ဝင် Astronomical လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လစဉ်အသိပေးထုတ်ဝေခဲ့ (Cardamone et al. 2009) ။ ဒါပေမယ့်ပဲစိတ်ဝင်စားအဲဒီမှာအဆုံးသတ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့နောက်ထပ်ကမ္ဘာတဝှမ်းနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တို့ကသုတေသနများ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ရပြီ (Izotov, Guseva, and Thuan 2011; Chakraborti et al. 2012; Hawley 2012; Amorín et al. 2012) ။ ထို့နောက် 2016 ခုနှစ်တွင်, ထက်နည်း 10 နှစ်တစ်ဦး Zooite နေဖြင့်ပထမဦးဆုံးပို့စ်ပြီးနောက်, သဘာဝတရားထဲမှာထုတ်ဝေနေတဲ့စက္ကူစကွဝဠာ၏သည် .ionizer အတွက်အရေးပါသောနှင့်စိတ်ရှုပ်စေသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက်အဖြစ်အစိမ်းရောင် Peas အဆိုပြုထား။ ကီဗင် Schawinski နဲ့ Chris Lintott ပထမဦးဆုံးအောက်စဖို့အတွက်အရက်ဆိုင်ထဲမှာက Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံကိုဆှေးနှေးသညျ့အခါဒါတွေကိုအစဉ်အဆက်စိတ်ကူးခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, က Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံပါဝင်သူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှငျ့ဆကျသှယျဖို့ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်မျှော်လင့်မထားတဲ့အံ့သြဖွယ်သောဤမျိုး enabled ။